Jerry Lewis nwụrụ, otu n'ime ndị na -akpa ọchị kacha ukwuu na akụkọ sinima | Nye m oge ntụrụndụ
Ihe nkiri sinima
Ihe nkiri Hollywood
Ndị na-eme ihe nkiri
Ndị na-abụ abụ
Jerry Lewis nwụrụ mgbe ọ dị afọ 91
Paco Maria Garcia | | Ndị na -eme ihe nkiri
Mgbe ọ dị afọ 91, ụnyaahụ otu n'ime ndị na -eme ihe nkiri na -atọ ọchị kacha mkpa n'akụkọ ihe mere eme nke sinima hapụrụ anyị ruo mgbe ebighị ebi. Jerry Lewis nwere ahụike siri ike mgbe niile, na ụnyaahụ, Sọnde, Ọgọst 20, 2017, obi ya enweghị ike ijide ọzọ.
Amara maka duo ya na Dean Martin guzobere N'ime ihe nkiri izizi ya, o mechara mee ụfọdụ egwu, dịka "Crazy about Anita", "ụjọ ụmụ agbọghọ", ma ọ bụ "N'agha na ndị agha".
Ruo oge ikpeazụ ya, amaara ya oge niile maka nnukwu ihe okike na ọrụ ebere na ọ rụrụ. Ọ na -etinyekwa aka na esemokwu oge ụfọdụ, ọkachasị maka njakịrị nwoke na nwanyị na ịkpa oke agbụrụ ya.
1 Mmalite: Ekepụtara maka ihe ọchị
2 Ọgazị nke tọrọ akwa ọlaedo ahụ
3 Di na nwunye ahụ na-atọ ọchị, Martin-Lewis
4 Ọrụ ebere ya
5 Mmeghachi omume ruo ọnwụ
6 Ụfọdụ fim ya
6.1 Ndị Bellboy (1960)
6.2 Ladmụnwaanyị (1961)
6.3 Prọfesọ Nutty (1963)
6.4 Ihe ịchọ mma ezinụlọ (1965)
6.5 Kedu ụzọ gaa n'ihu? (1970)
6.6 Eze ihe ọchị (1982), Martin Scorsese
6.7 Smorgasbord (1983), Jerry Lewis
Mmalite: Ekepụtara maka ihe ọchị
A mụrụ Jerry Lewis n'obodo New Jersey, na Newark, na Machị 16, 1926. Ọ tolitere n'ezinụlọ ndị na -ese ihe na Russia, ya na ha ka o weere nzọụkwụ mbụ ya na ihe ọchị.
Nwere ohere nke zuo oke ịrụ ọrụ n'ihu igwefoto wee mụta usoro ọhụrụ. Na mgbakwunye na ọrụ ihe ọchị ya, ọ bụ onye ntụzi ma nwetakwa ama ama dị ka onye edemede.
Ahụ ike ya tara ahụhụ kemgbe 80s. Na 83 a wara ya ahụ obi, na 1992 maka ọrịa kansa prostate ma nwee nkụchi obi n'afọ 2006. Otu afọ a, n'ime ọnwa June, a nabatara ya n'ụlọ ọgwụ dị na Las Vegas, n'ihi ọrịa mmamịrị.
Ihe nkiri ikpeazụ ya bụ "Max Rose", na 2013, n'agbanyeghị na ọ gara n'ihu na -eme ngosi na ihe nkiri Vegas.
Ọgazị nke tọrọ akwa ọlaedo ahụ
Jerry Lewis bụ akụ maka Paramount. N'ime ihe karịrị ọkara narị afọ, ihe nkiri ndị o mere jisiri ike nweta ihe karịrị nde $ 800, onye na -enyocha mbara igwe n'oge ahụ. Aha ya pụtara n'ihe karịrị ihe nkiri 60. E jiri ya tụnyere ndị nwere ọgụgụ isi dị ka Groucho Marx, Chaplin ma ọ bụ Buster Keaton. Nkatọ kachasị nke ndị na -ekwujọ ya bụ nke ọchị ugboro ugboro.
Ihe ọchị Lewis dabere na ahụ ya na ihu ya. M soro ọrụ nke ndị na -akpa ọchị na -e imitateomi ma ghara ịchọpụta ihe ọ bụla, yana ihe niile na -agazikwa.
Di na nwunye ahụ na-atọ ọchị, Martin-Lewis
Abụọ ndị na -akpa ọchị bịara mara nke ọma n'ụwa ọchị.. Jerry Lewis bụ onye na -eme mkpọtụ, na Dean Martin mara mma, onye nwere obi. Okwu njakịrị ya ghọrọ ọnọdụ na -atọ ọchị, na -enweghị isi. Nke nta nke nta etinyere ha n'ime ụlọ ihe nkiri na ụlọ oriri na ọ bestụ bestụ kachasị mma, sinima na telivishọn ji aka na -anabata ha.
Ka afọ ole na ole gachara, ego nke abụọ na ama ama ha na -ekewa ha. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, ha zutere ọzọ ekele nke otu enyi ibe ha ama ama: Frank Sinatra.
Ọrụ ebere ya
Lewis ghọkwara onye ama ama maka ọrụ enyemaka ya.. Na telivishọn, ọ na -ahụ maka iduzi marathons nke o ji bulie nde kwuru nde dollar. N'echiche a, ọ nwetara ya naanị otu ugboro site na Academy of Motion Picture Arts and Sciences, na 2009, mgbe e nyere ya ihe nrite Jean Hersholt maka ọrụ enyemaka ya.
Ihe kacha kpalie ya bụ ọrụ ebere ya na Muscular Dystrophy Association, nke ọ bụ onye isi ala mba afọ ole na ole.
Ọ nwedịrị nhọpụta Nobel Peace Prize maka ntinye aka ya na nke a.
Mmeghachi omume ruo ọnwụ
Ejirila netwọkụ mmekọrịta ozi ekele nye nnukwu onye ọchị.
N'etiti okwu ndị ama ama, Whoopi Goldberg Ọ sịrị, 'Jerry Lewis nwụrụ taa, ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa hụrụ ya n'anya, nyere ọtụtụ nde ụmụaka aka na telethon ha. Ezumike na nkasi obi nye ezinụlọ ya.
Ọzọkwa Spanish omee na director Santiago dị mma O nwere okwu ncheta ole na ole: «onye na -eme ihe nkiri Jerry Lewis, onye na -akpa ọchị, onye ntụzi, onye na -enyocha ihu, onye na -ese ihe nkiri na -ekwu nke ọma. Enwere m echiche efu nke ịhụ ya ka ọ dị ndụ n'ihi na ọ ka na -eme ya ».
Ụfọdụ fim ya
Ndị Bellboy (1960)
Ihe nkiri gbara na oji na ọcha, ebe anyị na -aga ọmarịcha ihe nlegharị anya, nke yiri ka emezighị emezi, n'ụdị Lewis kachasị ọcha.
Nwa ya nwanyị hapụrụ ya, ọ ga -ebi naanị ya. Mana ọ ga -enwe ọchichị inweta ọrụ n'ụlọ ebe ụmụnwanyị mara mma mara mma na -asọpụrụ ya. N'ebe ahụ ka ọ ga -abụ onye obi mgbawa, wee wepụ ihere ya n'akụkụ.
Prọfesọ Nutty (1963)
Es ụdị nke Dr. Jekyll na Maazị Hyde. Mgbe ọ takingụrụ ọgwụ anwansi nke o mere onwe ya, prọfesọ kọleji jọrọ njọ na nke na -enweghị isi tụgharịrị ghọọ onye aghụghọ. Na ihe a niile nwere mmegharị mmegharị ahụ, mgbatị ahụ na ụdị ihe ọchị niile dị iche iche.
Ihe ịchọ mma ezinụlọ (1965)
Onye ga -abụ onye nkuzi kacha mma maka obere nwanyị bara ọgaranya nke na -enweghị nne na nna? Nwatakịrị nwanyị ahụ ga -enyocha ndị ga -eme ntuli aka dị iche iche, ha niile bụ nwanne nna ya. Otu n'ime ha bụ naanị onye nwere ezi obi, ndị ọzọ niile na -enwekwa mmetụta dị ukwuu.
Kedu ụzọ gaa n'ihu? (1970)
Ihe nkiri mgbochi agha banyere agwa na -eduhie eduhie nke malitere ibibi ndị Nazi n'onwe ya. Ọ na -eji akụnụba ya akpọrọ ndị agha juputara na ndị pụrụ iche dịka onwe ya. Mana site na ego ya, onye ọchịagha a na -azụ ndị agha ya, na -enwetakwa ọganiihu ndị agha dị mkpa.
Eze ihe ọchị (1982), Martin Scorsese
Ihe ịga nke ọma na telivishọn na -eduga Jerry Lewis ịkọwa ụfọdụ ihe nkiri maka telivishọn. N'ime nke a ọ na -arụ ọrụ dị ka agwa, na -enwe obere amara na ilu maka ndụ. Agbanyeghị, nnukwu Robert de Niro na -ahụ ya, na -enwekwa mmasị na ya. Maka nke a, ọ na-agarịrị ịtọrọ mmadụ, iji nwaa dochie ya na mmemme telivishọn a ma ama.
Smorgasbord (1983), Jerry Lewis
Ọ bụ ihe nkiri ọhụrụ ya nke o dere eserese. Mana nke a apụtaghị na amachapụla ya. Ihe nkiri a na -amalite site na satire na ndị isi mgbaka na ndị ọrịa ha. Ọ na -ejikwa ihe nkiri na -egosi ụdị na ọnọdụ onye na -akpa ọchị: onye ọrịa Lewis enweghị ike ịnọdụ n'ụlọ nchere mgbaka, n'ihi na ihe niile na -amị amị.
Isi ihe onyonyo: La Vanguardia / Publimetro / Diario Popular / Bekia
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nye m oge ntụrụndụ » Cine » Ndị na -eme ihe nkiri » Jerry Lewis nwụrụ mgbe ọ dị afọ 91
Ihe nkiri kacha mma mere eme
Kedu ihe bụ Coachella?